Ha diin diidin dad iyo doolar daraaddood | Heeshi
Ha diin diidin dad iyo doolar daraaddood
Khamiis, Abriil 2, 2015 ·	by Idiris M. Cali ·	in Maqaallo	· Faallo u dhaaf
Bishintiisa hoose way buuran tahay, oo cas tahay. Wuxuu hilan yahay iskujooggii Afrikada galbeed, oo waa reer Nayjeeriya. Waa iskujoog koofiyaddu na carwaajiis tahay, oo indhaha qaban og. Dhawr jeer baan cidhifkii uu fadhiyay qooraansaday, mise sida aan ugu maqanahay aragtiyaha shirka la isku weydaarsanayo ayuu ugu maqan yahay. “Mar uun baad ogaan wuxuu ka fekerayo,” ayaan maanka iska lahaa, oo waxaan sugi kari la’aa inta laga hakanayo shirkan 9:30kii subaxnimo Jaamacadda Harvard ka furmay ee aan magaalada Lowell uga soo jarmaaday aroortaas ahayd May 4, 2013.
“Asalaamu calaykum,” ayaan ku salaamay markaan sidaas ba uga soo baxnay qolkii shirka. “Hi,” ayuu iigu jawaabay. Luuqii aan labadeennu u cag dambaynay ayaa ila sii madoobaaday. Qolkii lagu cuntaynayay ayaan u gucleeyay. Maxaa caddaan ah? Maxaa Turki ah? Intii aan hammuunta la dagaallamayay ee aan qalbaca kalluunka ah isla dhacayay waan hadal la’aa. Markii aan dhiishaan-dhacsaday ayaan Afrikaankii dhankiisa u cuf-jiidmay.
Cabbaar markii aan is tooyannay ayaan weydiiyay, “Maxaad illaa iyo haddeer ka korarsatay shirkan?”
“Waxba! Ma jecli inaan ka dhex muuqdo meel diin ba lagu hayo. Nin aan wax isku nahay ayaa i soo jujuubay. Isagii na ma hayo!” Si daacad ah ayuu u dhoolacaddeeyay.
“Buunniyadii aragtiyahooda la wad-waday kee baad isku aragti dhawaydeen?” ayaan haddana weydiiyay.
“Ma garan karo. Si cad wax u ma fahmaynin. Mar kale, kama helo arrimaha diimaha khuseeya, oo waan soo lug go’ay.”
Intaan candhuuftayda dib u liqay ayaan ku iri, “Arrimihii laga hadlayay dunida ayay khuseeyeen…” In badan ayaan ku dheeraaday wixii laga hadlayay iyo sida aan kolba u fahmayay.
Markuu cabbaar hadalku ka soo dhici waayay ayaan ku hal gaaday, “Adigu awel diinteed haysatay?”
“Waxaan ahay Kaatolig. Se aniga iyo reerkaygu ba ku ma xirnin Kaniisad na. Waan la ciidnaa Kiristaanka, oo la xafladaysannaa. Laakiin diinta Afrikaanka ayaan ku dhaqannaa.”
“Oo maxay ahayd diintaasu?”
“Waa dhaqan uun. Isqaddarinta qoyseed ayaa u udub dhexaad ah. Marba haddaad la farxayso, oo kaalmaynayso, dadka aad miis wax ku wada cuntaan maxaad diin uga baahan tahay?”
Waxaan u qaatay weydiin ay deexashadu ka keentay, oo waan iska baal maray. Balse waxaan damcay inaan ka soo tuujiyo sababta uu Kaatoligga u sheeganayo mar ba haddii uu diin kale ku dhaqmo. Intuu indho galka ka baxsan igu soo eegay ayuu yiri, “Nin gurigaaga u soo dhacay, oo ku boobaya miyaad diin ugu hoos jiri kartaa?”
Wuxuu ii kala dhig-dhigay wixii maal kaga “lumay” diintiisa. “Waa dhibaato inteeda le’eg!” ayaan deg-deg u idhi anoo Mike madaxa ku haya. “Ciise ba gaajo ayuu ahaa. In wixii aad qaadi karto lagu saaro ayay ahayd, oo ma ahayn in sidaas candhablaha laguu jaro!”
Intaas baa degtay, oo dejisay, maankiisa. Markuu iga maqlay magaca Nabiga suubban ayuu jidhidhicooday. Wuu ogaa, oo way ku soo duxday, sida Nabigani u daryeeli jiray wax-ma-haysatada. In uu Nabigaas dadkiisa yahay ayuu ku adkaystay. “Dadka iyo diintu ha kuu kala soocnaadaan—”
“Se lama kala sooci karo!” ayuu hadalkii igaga kala jaray. “Doollarka ayaa isku haya,” ayuu sii raaciyay. Qosol baan labadeennu ba wada daadannay. Annaga oo sii qoslayna ayaa na loo sheegay in shirku dib u furmayo. Halkii baan iska sii raacnay, oo qolkii shirka isku shubnay.
Il: Warsidaha BADSO
← Tusaalaynta xubnaha maansada
Tirakoobidda xubnaha maansada Soomaaliyeed →